Mudita Shwe Kyaung: 2013
Posted by Nyan Oo Maung at 6:08 PM No comments:
Posted by Nyan Oo Maung at 4:47 PM No comments:
မုဒိတာရွှေကျောင်းရဲ့ စုပေါင်းဘုံကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်ပွဲကို ၂ဝ၁၃ ခု အောက်တုိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပါမယ်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဗေးဧရိယာရှိ ကျောင်းအသီးသီးက သံဃာတော်များကိုပင့်ဖိတ်ကာ သင်္ကန်း၊ ဆွမ်း၊ နဝကမ္မစတဲ့ လှူဖွယ်များ လှူဒါန်းပြီး ပရိတ်သတ်များ ကိုလည်း စေတနာရှင်များက စားသောက်ဖွယ်များနဲ့ ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါမယ်။
ကထိန်သင်္ကန်းတစ်စုံလျင် ဒေါ်လာ ၅ဝ နှုန်းဖြင့် လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကထိန်ပွဲသို့ ကြွရောက်ကြပါရန်ကိုလည်း ကြည်လင်စိတ်ထား ဖြင့် လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါတယ်။
We would like to cordially invite you to share our Kathina Robe Offering Ceremony with us. As you know, this isamomentous event and it would mean so much to us if you could be there.
The event will take place at Mudita Shwe Kyaung, located at 27695 Leidig Ct Hayward, CA 94544. We look forward to seeing you then.
Venue: 27695 Leidig Ct.
09:30am – 10:00 Chanting Patthana by Metta Yaunggyi
10:00am – 11:00 Kathina Robe Offering Ceremony
11:00am – 1: 00 Lunch offering to monks and Provide lunch
မိခင်ကြီး ဒေါ်ရင်ထွေးအမှူးထားပြီး ကုိုထုိုက်စံ မခင်ဌေးဝင်းနှင့် ကုိုရွှေတုိုး မလှလှဝင်း= မုန့်ဟင်းခါး
မိခင်ကြီး ဒေါ်ဟယ်လင်လင်းအမှူးထားပြီး မာဂရက်လင်း၊ ဒေစီလင်း မိသားစု= ဖာလူဒါ၊ မြန်မာမုန့်
ဦးညွန့်သန်း ဒေါ်ထွေးထွေးဝင်း မိသားစု= ဘူးသီးကြော်
ဒေါ်နွယ်နီသောင်း ဒေါ်ခင်နွယ်စုိုး မိသားစု= နန်းပြားသုပ်
ဦးကျော်လင်း ဒေါ်နန်းခမ်းရွှေ မိသားစု= ပင်ပွား၊ ကျောက်ကြောဖျော်ရည်
မေတ္တာရောင်ခြည်အသင်း= ဆွမ်းဟင်း၊အချိုပွဲ၊ သစ်သီး
နှစ်ဖက်မိဘများရည်စူး၍ အလှူရှင်မိသားစု= ဘယာကြော်
မေမဒီခင် ကုသုိုလ်ရှင်များ =ေ က်ာရည်ခေါက်ဆွဲ
ဦးဂျက်ကဆင် ဒေါ်အေးအေးနွယ်=ေ ရခဲမုန့် ကြက်ဥပူတင်း
Contact: 510 574 5442 Email: ashinlay@gmail.com Make check to: Mudita Shwe Kyaung
Posted by Nyan Oo Maung at 4:46 PM No comments: